နှလုံးသားရေးရာ – အခမဲ့
လူသေလျှင် လူမှာစောင့်တဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ် သေပါသလားဘုရား
” ဆည်မနိုင်တဲ့ စုန်ရေ ” တဲ့ ဖတ်ကြည့်ပါနော်
“အမေကသားကို မချစ်ပါဘူးဗျာ” “နင်က ချစ်စရာ ကောင်းတာကိုး အကောင်ရဲ့” “အမေက သားကို ဆိုအကောင်းကိုမပြောဘူး” “အေးဟေ့ ငါ့သားလေး သိပ်ချစ်တာပဲ တွေ ဘာတွေ ပြောမနေအားဘူး ၊ လုပ်စားရတာ မောရတဲ့ကြား နင်ကတစ်မျိုး ရော့ ဒီမှာ လက်ဖက်ရည်ဖိုး ထားခဲ့တယ် သွားမယ် ” ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်သည်။ သေချာအောင် စောင်ထဲက ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ …
အိမ်ထောင်ရှင်မမတွေရော၊ အိမ်ထောင်ရှင်မလောင်း တွေရော မှတ်​သားလိုက်​နာသင့်​​သော အချက်​များ
၁။မိမိခင်ပွန်းကို ဘယ်တော့မှ မဟောက်ပါနဲ့၊မ​အော်​ပါနဲ့။ သူ့ကိုမရိုသေခြင်း လက္ခဏာပါ။ ၂။မိမိခင်ပွန်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို မိသားစုဝင်​၊ သူငယ်ချင်းတွေကို မပြောပြပါနဲ့။လင်မယားဆိုတာ တစ်ဦးအကြောင်းတစ်ဦး ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်​ပါတယ်​။ ၃။အမူအရာ၊အစောင်းအမြောင်းတွေနဲ့မိမိခင်ပွန်းကို မဆက်ဆံပါနဲ့၊ (သူ ဘယ်လိုအထာ ကောက်သွားမလဲ ဆိုတာမသိနိင်ဘူး)အမြဲတမ်းပြန်ခံပြောတက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ကို မပိုင်ဆိုင်ရကြဘူး။ ၄။မိမိခင်ပွန်းကို တစ်​ခြားယောင်္ကျားတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။ (သူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေအားလုံးကို ကိုယ်က မသိနိုင်ပါဘူး။)ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ မာန၊ ဂုဏ်​သိက္ခာကို စော်ကားမိရင် …
၁၀၇ သိန်းကိုအလုပ်သမားများအား ဘောနပ်(စ်)ပေးခဲ့တဲ့ ”လိုတရ အမွှေးတိုင်” မိသားစု
ကောင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ရှင်သူဌေး သာဓုပါဗျာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပခုက္ကူခရိုင် ရေစကြိုမြို့ ”လိုတရ အမွှေးတိုင်” မိသားစုမှ သင်္ကြန်ကာလ အလုပ်ပိတ်ရက် နှစ်သစ်အကြိုကုသိုလ်ဒါနအဖြစ် အလှူ ငွေကျပ် ၁၀၇ သိန်းကိုအလုပ်သမားများအား ခွဲဝေပေးကမ်းလှူဒါန်းပေးခဲ့ (11.4.2018) ကိုလေး(ရေစကြို) Unicode ကောငျးလိုကျတဲ့အလုပျရှငျသူဌေး သာဓုပါဗြာ မကှေးတိုငျးဒသေကွီး ပခုက်ကူခရိုငျ ရစေကွိုမွို့ ”လိုတရ အမှေးတိုငျ” မိသားစုမှ သင်ျကွနျကာလ အလုပျပိတျရကျ …
မြန်မာ့စာသင်ကျောင်းများတွင် (၂) နှစ်အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားပေးမည့် လေးစားလောက်တဲ့ အမေရိကန်သူလေး
Peace Crops Myanmarအစီအစဉ်ဖြင့် (အ.ထ.က)ပေါင်ကျောင်းကြီးတွင် အမေရိကန်နိူင်ငံသူ ဆရာမ Shannon မြန်မာအမည် မစံပယ် – အသက် ( ၂၃ ) နှစ်သည် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကို ၅ တန်း၊ ၆ တန်း၊ ၇ တန်း တို့ကို ၂ နှစ် ကြာ သင်ကြား ပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခုကျောင်းပိတ်ချိန်တွင် …
YBS -89 ပေါ်မှ ထူးခြားတဲ့ မန္တလာသူ အလှူရှင်မလေး
မနေ့က YBS-89 ပေါ်မှာ မိန်းက​လေးတစ်ယောက်က ယပ်တောင်သည် အဘတစ်ဦးကို “အဘ ယပ်တောင်တစ်ချောင်း ဘယ်လောက်လဲ´´တဲ့ ” အဘက..” တစ်ချောင်း ၂၀၀ ကျပ်ပါ´တဲ့. မိန်းကလေးက တစ်စည်းလုံးဆိုဘယ်လောက်လဲ အဘ ဆိုတော့ တစည်းလုံးယူရင် ၂၀၀၀၀ ကျပ်ပါ တဲ့ ” မိန်းက​လေး က ဒါဆိုရင် ကျွန်မတစ်စည်းလုံးယူမယ် အဘနေမကောင်းဘူး ထင်တယ် …
နှစ်(၂ဝ)ကျော်သည်အထိ အကျီ င်္တစ်ထည်တည်းကိုပဲ ဖာထေးဝတ်ဆင်ခဲ့သူ
အသက် ထက်တောင် ပိုပြီးတန်ဖိုးထားရတဲ့ အရာတွေလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲဈေးပေါပါစေ..တန်ဖိုး ထားတတ်သူလက်ထဲရောက်သွားရင်တော့ ထို ပစ္စည်း ဟာ တန်ဖိုး ရှိနေတာပါပဲ။ တွစ်တာ သုံးစွဲသူ @922_riaruဟာ သူမရဲ့အဖေ နှစ်(၂ဝ)ကျော်သည်အထိ အကျီ င်္တစ်ထည်တည်းကိုပဲဝတ်နေတာကို သတိထားမိခဲ့တယ်။ သူမ အဖေ ဟာ ထို အကျီ င်္ကိုအမြဲတမ်းသန့်ရှင်းနေပြီး ပြဲစုတ်သွားရင်လည်း တစ်ခုခုနဲ့ ပြန်ဖာထေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ထွေထွေထူးထူးကိစ္စတွေရှိရင် …
Facebook သမီးရီးစား ဖတ်ထားစေချင်
လွန်ခဲ့သော တစ်လခန့်က Beetalk ကနေ တွံတေးသူ ညောင်တံခါးကျေးရွာမှာနေတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ရီးစားဖြစ်ကြတယ်။ ကောင်မလေး ၁၀တန်း ကျောင်းသူ မိဘတွေက အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မို့ ဘွားအေနဲ့နေတယ်၊ဒီကောင်က တောင်ဥက္ကလာပမြိုနယ် အမှတ် ၂၆၉ ခ ၁လမ်း ၊ ၇ရပ်ကွက်၊သူနာမည်က ဥာဏ်ဖြိုးဦး ၂၄နှစ် (ဘ)ဦးအောင်ကျော်သူ တဲ့။ ခလေးမလေးနဲ့သမီးရီးစားဖြစ်တော့ လူငယ်သဘာဝ ဖုန်းနံပါတ်တွေတောင်း ချစ်ကြောင်း ကြိုက်ကြောင်းတွေ …
သမီးလေးနန်းဆိုင်လူ ၏ရင်သားအား ညနေ(3:15)နာရီမှာ အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း
သမီးလေးနန်းဆိုင်လူ အား ညနေ(3:15)နာရီမှာအောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်းဝမ်းသာစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။ လိုအပ်သည်များကိုဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေပါသဖြင့်ခွဲစိတ်ကု သပြီးသမီးလေးပုံအားတင်ပြ၍ မရသေးပါ… စီမံဦးဆောင်သူဆရာကြီးဒေါက်တာ နန္ဒဝင်းနှင့်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာနိုင်နိုင်ထွန်းနှင့်မေ့ဆေး ဆရာဝန်ဒေါက်တာသီတာဝင်း အရိုးအထူးကုဆရာဝန်ဒေါက်တာ ကိုလေးဝင်းနှင့် ဆရာဆရာမများ သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့် ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေကြသော ဆေးရုံ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးကြသောမေတ္တာရှင် ဂရုဏာရှင်စေတနာရှင်များအား လုံးအားဝမ်းမြောက်စွာကျေ …
ဖခင်ကို ကန်တော့ရင်း နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခြင်းအဖြစ် နှုတ်ဆက်နေတဲ့ ဂျင်းနီ
အဆိုတော် ဂျင်းနီက သူမသိပ်ချစ်ရတဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ တော်တော့်ကို ခံစားနေရပါတယ်။ သူမရဲ့ ဖခင်ဟာ ဧပြီ(၆)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းလောက်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဧပြီ(၈)ရက်နေ့ညနေ(၅)နာရီက သူမရဲ့ ဖခင်ရဲ့ ရုပ်လောင်း ကို ရေဝေးသုသာန်သို့ပို့ဆောင်ပြီး မီးသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျင်းနီခမျာ ဖခင်ကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကန်တော့လိုက်ရပေမယ့်လည်း ရင်ထဲမှာ နင့်နေအောင် ကြေကွဲရပါတယ်တဲ့။ “ဒီးဒါကို …
သားသမီးရရှိရန် ခက်ခဲသော စုံတွဲအတွက် IUI (Intrauterine Insemination) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း?
Q: IUI (Intrauterine Insemination) ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း? A: IUI (Intrauterine Insemination) ဆိုသည်မှာ အမျိုးသား သုတ်ပိုးအား ပြင်ပတွင် ဆေးဖြင့် စီမံပြီး ရွေးချယ် သန့်စင်၍ ရရှိလာသည့် ရှင်သန်ကောင်းမွန်သော သုက်ပိုးများကို အမျိုးသမီး သားအိမ် အတွင်းသို့ ပိုက်ပျော့ ဖြင့် ထည့်သွင်းပေးကာ ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်နှုန်း ပိုမို …
အခမဲ့ Copyright © 2018.